‘बाहिर देखिने मात्र सौन्दर्य होइन’ - संवाद - नेपाल
अछाममा जन्मिए, टीकापुरमा हुर्किए, डा सन्तोष उपाध्याय, २८ । यसपालिको मिस्टर नेपालमा २१ प्रतिस्पर्धीलाई उछिने । उनी ललितपुरस्थित लुभुको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका मेडिकल अधिकृत हुन् ।
तपाईंलाई मिस नेपालजस्तो चर्चा मिस्टर नेपालमा हुँदैन भन्ने लाग्छ ?
लाग्ने भन्दा पनि यो त सत्य हो नि ।
किन चर्चा कम ?
केटाहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिता भनूँ वा मिस्टर नेपालको इतिहास नै छोटो छ । २००१ देखि सुरु भयो । २००३ देखि ७ वर्षसम्म टुट्यो । सौन्दर्य प्रतियोगिता भन्नासाथै महिलासँग जोडिएर आउँदो रहेछ ।
तपाईं आफूचाहिँ सौन्दर्य केलाई मान्नुहुन्छ ?
हेर्दा जे देखिन्छ, त्यो मात्र होइन । भित्री सौन्दर्य झन् महफ्वपूर्ण हुन्छ ।
भित्री सौन्दर्य भन्नाले ?
मानिसको बोली, व्यवहार, समाजप्रति उसको दायित्व । समाजमा हामीले सुन्दरता र व्यवहारकै आधारमा मानिसलाई आदर्श मान्छौँ । यी दुवै कुरालाई यस्तो प्रतियोगितामा सँगै लैजानुपर्छ ।
तैपनि मिस नेपालको भन्दा चर्चा कम हुँदा अलि खल्लो लाग्दैन ?
बिलकुल लाग्दैन । आफूलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्नेमा भर पर्छ । विस्तारै महिलासँग मात्रै जोडिने सुन्दरताको धारणा बदलिँदै छ । मिडियाले पुरुषको सौन्दर्य प्रतियोगितालाई प्राथमिकता नदिएर पनि ओझेल परेको हो ।
तपाईं त चिकित्सक, ग्ल्यामरस दुनियाँमा केले तान्यो ?
पहिलेदेखि नै फरक काम गर्न रुचाउँछु । फुटबल, पेन्टिङ, भिडियोग्राफी, फोटोग्राफीमा रुचि छ । भिडियोग्राफीको देशव्यापी प्रतियोगिता पनि जितेको छु । अछाममा दुइटा पुस्तकालय खोलेँ । सिन्धुपाल्चोकको दुबाचौरमा भूकम्पका बेला आशाको किरण संस्थामार्फत १३ वटा घर बनाइयो । सामाजिक काममा अझ बढी लाग्न मिस्टर नेपालमा भाग लिएको ।
मिस्टर वल्र्डमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छु भन्ने लागेको छ ?
सबै प्रतिस्पर्धीको लक्ष्य जित्ने हो । मैले त्यहाँ मेडिकल क्षेत्रमा आफूले गरेको कामको छाप छाड्छु भन्ने छ ।
के छाप हो त्यस्तो ?
मेडिकलका विभिन्न संगठन चलाएँ । त्यस क्रममा २६ देशमा प्रतिनिधि, सहभागी र पाहुना बनेर पुगेँ । नेपालमा इस्ट एसियन मेडिकल स्टुडेन्ट कन्फरेन्स गराएँ, त्यो दक्षिण एसियामै पहिलो थियो । यिनै कुराले आफूलाई प्रमाणित गर्नेछु ।
ट्याग: ८ प्रश्नमिस्टर नेपालसौन्दर्य प्रतियोगिता